Semalt: Spam Tokony ho Fantatry ny Media sosialy
Spam no vondron'olona tsy voavolavola sy tsy misy dikany nalefa ho an'ny mpampiasa aterineto marobe. Mampiasa teknika samihafa ny spam mba hanaparitaka spam raha te hampiditra ny mpisera amin'ny fanafihana phishing, malware, ary programa afiliana. Artem Abgarian, Semalt Mpitarika Manana Success Success, dia nanambara fa voalohany indrindra dia nampiasaina ho toy ny loharanom-pifandraisana ny spam, saingy ankehitriny dia naka endrika mendrika izy ary tokony hesorina tsy ho ela. Ankoatra ny spam e-mail sy ny spam-ny tambajotra sosialy dia olana goavana iray azo zaraina ho karazany dimy:
Fampahalalam-baovao sy kaonty hosoka manokana:
Ny kaonty amin'ny media sosialy sy ny sehatra sosialy dia fanalahidy ho an'ny spamming. Ny hackers dia mamorona sombin-tsarin'ny Facebook sy Twitter, ankamaroany miaraka amin'ny anarana sy sary avy amin'ny ankizivavy mba hampiantrano mpampiasa maro araka izay tratra. Tiany ny hahazo ny fahamendrehana sy ny fahitana azy ireo ho an'ny tranonkalany manokana ary hahazo anao amin'ny fomba maro. Mety hilaza izy ireo hoe olo-malaza, mpanao politika, olo-manan-kaja, na cricketers, ary te hizara sy hizara ny hafatrao ianao.
Hafatra maro no hafatra miaraka amin'ny anarana na lahatsoratra izay alefa any amin'ny mpisera media sosialy isan-karazany..Ny sasany amin'ireo spam dia mamorona kaonty sandoka ary mandefa hafatra duplicate amin'ny fotoana fohy. Na izy ireo dia te-hamorona korontana ho an'ireo mpampiasa ara-dalàna na te-handràra olona miaraka amin'ny tolotra sy rohy avy amin'ny fiarahamonina. Ny fampiasana hafatra manerantany sosialy dia nanomboka tamin'ny 2009. Tamin'io fotoana io, tranonkala spam sasany izay nanolotra asa no nanosika ireo mpampiasa hitoky fa marina ny tontolony sy ny tranokalany.
Ny rohy maloto dia miparitaka amin'ny aterineto amin'ny alàlan'ny media sosialy, ary ny hackers na spammers dia mikasa ny hanisy ratsy, hanimba na hamitaka maro be na tranonkala. Rehefa tsindry eo amin'ny iray amin'ireny rohy ireny ianao dia mety haverina mankany amin'ny Twitter, Google+ na Facebook profile izay tsy misy ifandraisany amin'ny maha-ara-dalàna anao. Raha ny marina, ny mpampiasa dia voatery mividy ireo rohy maloto ireo ary ny hackers dia manaparitaka ny malware amin'ny media sosialy mba hangalarana ny fampahalalana tsy miankina sy ny antsipirian'ny banky.
Maro ny vokatra sy tolotra azo amidy amin'ny aterineto, ary ny toerana malaza indrindra amin'izany dia ny media sosialy, mazava ho azy. Mampalahelo fa tsy mahazo ny vokatra hitanao amin'ny sary ianao, satria ireo mpitsikilo dia mandoa vola fotsiny ho an'ireo mpampiasa. Ny fanao toy izany dia mamela ny hosoka amin'ny aterineto hivarotra vokatra bebe kokoa ary hampiroborobo ny raharahany.
Votoatiny tsy fantatra:
Tsy misy tranonkalan'ny haino aman-jery sosialy maniry ny hizara ny votoatin-tsainy sy ny adihevitra tafahoatra; Izany koa dia endrika spam izay miasa tsara ho an'ny spammers ary tsy ilaina amin'ny marika sy ny fikambanana ara-dalàna. Raha ny marina, maro ireo hafatra tsy misy dikany no voatatitra ho an'ny Facebook, ary maro ny pejy sy ny profilasina no nakatona mba hizarana ireo zavatra tsy fantatra anarana isaky ny faharoa. Asa goavam-be izy io izay tokony ho nesorina araka izay tratra Source .